Kuxwayiswa abashayeli ngezindlela zokuqapha abangamasela ezimoto | IOL Isolezwe
Kuxwayiswa abashayeli ngezindlela zokuqapha abangamasela ezimoto
Isolezwe / 24 May 2012, 12:19pm /
NAPHEZULU kokuba izibalo zobugebengu ezakhishwa ngonyaka odlule u-2011 zikhombisa ukwehla ngamaphesenti angu 10, kodwa abashayeli bezimoto bayaxwayiswa ngokuthi bangazitsheli nje ukuthi le nkinga yobugebengui isidlulile bese bekhululeka.
Uma kubhekwa ngasekwebiweni kwezimoto ngonyaka odlule, izibalo zikhomba ukuthi zingu 64 504 izimoto ezebiwe kwathi ezingu 10 627 zadunwa.
Lezi zibalo ziveza ukuthi ngosuku kwebiwa izimoto ezingu 176, kanti ezingu 29 ziyadunwa lapha eNingizimu Afrika.
Ngokusho kukaChristelle Fourie, onguMqondisi Jikelele wenkampani yomushwalensi iMUA Insurance Acceptances, kusemqoka kakhulu ukuthi izimoto zifakwe i-tracker.
Uthi i-tracker akuseyona nje into ewumtsako kodwa isiyisidingo. Ululeka abantu abathenga izimoto okokuqala ukuthi kubalulekile ukuthi bazinike izikhathi babheke imishwalense abangayithatha uma leyo moto abafuna ukuyithenga kuvela ukuthi intshontshwa kakhulu.
Kumele ngesikhathi bethenga imoto babuze ukuthi uma befaka i-tracker singehla yini isikweletu. UFourie uqhuba uthi indawo lapho umuntu epaka khona imoto yakhe ebusuku nayo iyabhekwa uma sekukalwa imali okumele ayikhokhele umushwalense njalo ngenyanga.
Uthi muva nje amasela ezimoto aseqhamuke nezinye izindlela zokweba njengokusebenzisa i-remote control yesango ukwenza imoto ingakhiyeki. Uma sebebonile ukuthi umshayeli akabonanga babe sebengena bathathe yonke into esuke isemotweni, kodwa imoto uqobo lwayo bangayithathi.
“Lezi izigangi nje futhi zivamise kakhulu ukwenza lo mkhuba ezinxanxatheleni zezitolo noma lapho kusuke kunabantu abaningi khona,” kusho uFourie. Uthi ngenxa yalobu bugebengu siya ngokukhula isibalo sabantu abafaka izicelo zokukhokhelwa imishwalense yabo.
Uthi imoto entshontshwa kakhulu ngamasela iToyota Hilux ngoba basuke befuna amaphathi ayo. Uthi amaphathi ale moto asetshenziswa kakhulu ematekisini yingakho yebiwa kangaka.
Imoto yesibili ethwandwa kakhulu amasela iCiti Golf ngokusho kukaFourie. Ube esexwayisa abashayeli ukuthi ngaso sonke isikhathi izimoto zabo bazipake ezindaweni ezisobala futhi nalapho kukhona khona amakhamera e-CCTV.